Kim John-Un iyo Trump oo gaaray Singapore iyo Shir madaxeedka oo ka berri furmaya Sentosa. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Kim John-Un iyo Trump oo gaaray Singapore iyo Shir madaxeedka oo ka...
Kim John-Un iyo Trump oo gaaray Singapore iyo Shir madaxeedka oo ka berri furmaya Sentosa.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa gaaray wadanka Singapore halkaasi oo lagu wado in uu ka dhaco kulan madaxeedka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Kan Kuuriyada Waqooyi ee Kim John.
Shir Madaxeedka labada hogaamiye ayaa loo ballan san yahay inuu si rasmi ah uga qabsoomo jasiiradda Sentosa ee dalka Singapore maalinta talaadada ah ee 12-ka June oo berri ku beegan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo inta uusan gaarin Singapore ka hadlay kulanka isaga iyo Kim John Un ay ku yeelan doonaan Singapore ayaa sheegay in ay tahay fursadda keliya ee lagu abaari karo nabadda.
Vivian Balak rishnan oo ah wasiirka Arrimaha dibadda ee wadanka Singapore ayaa ku qortay boggeeda Twitter-ka sawirka Kim kadib markii uu soo gaaray jasiiradda dalkaasi Singapore.
Waa markii ugu horreeysay oo uu Madaxweyne Trump kulan la yeesho Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim John-Un dkaasi oo lagu wado in ka dib kulanka ay yeeshaan isaga iyo Trump uu si cad u sheego in uu ka tanaasulo hubka Niyukliyeerka ee uu dalkiisu leeyahay.
Previous articleTalyaaniga oo udiiday doon sidday tahriibayaal in ay ka gudbaan dekedda Talyaaniga “Sawirro”
Next articleMadaxda Masar iyo Ethiopia oo ku heshiiyey wadaagga biyaha wabiga Nile